व्यक्तिगत प्रयासबाट राष्ट्रलाई पदक दिलायौं, अब राष्ट्रले सोचोस् ! « News24 : Premium News Channel
व्यक्तिगत प्रयासबाट राष्ट्रलाई पदक दिलायौं, अब राष्ट्रले सोचोस् !
काठमाडौं, १८ भदौ । १८ औ एसियाली खेलकुदमा नेपालका लागि एकमात्र पदक दिलाउन सफल खेलाडीहरु सम्मानित भएका छन् । इण्डोनेसियामा सम्पन्न एशियाली खेलकुदमा नेपालले एक मात्र रजत पदक प्याराग्लाडिङबाट जितेको थियो ।
नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले काडमाडौंमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै पदक विजेता खेलाडिहरु र प्रशिक्षकलाई नगद पुरस्कार सहित सम्मान गरेको हो । एशियाडमा नेपाललाई एक मात्र पदक दिलाउनेमा प्याराग्लाडिङका ५ खेलाडी छन ।
२० वर्षपछि मुलुकलाई एसियाली खेलकुदमा पदम जिताउन सफल खेलाडीहरुको टिममा पाइलट बिमल अधिकारीले सहित युकेश गुरुङ, विजय गौतम, सुशील गुरुङ र बिशाल थापा थिए । टिमको नेतृत्व बिमल अधिकारीले गरेका थिए । उनले सरकारलाई आफुहरुमा क्षमता भएको कुरा प्रमाणित गरिसकेको र अवका दिनमा सरकारबाट सहयोग गरिनु पर्ने धारणा राखे ।
साथै अधिकारीले ब्यक्तिगत प्रयासबाट यहाँ सम्म पुगेको समेत गर्वका साथ बताएका छन् । पदक विजेता खेलाडीलाई नगद ५ लाख सहित सम्मान गरिएको हो । नेपालले पुरुष टिम क्रस कन्ट्री स्पर्धामा रजत पदक हात पारेको थियो । यो पदक करिब दुई दशकपछि नेपालले एशियाली खेलकुदमा जितेको सबैभन्दा ठूलो पदक हो ।
खेलाडीलाई बग्गीमा राखेर त्रिपुरेश्वरबाट सुन्धारा, रत्नपार्कहुँदै राष्ट्रिय सभा गृहमा पु¥याएर सम्मान गरिएको थियो । खेलाडीहरुलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव केशवकुमार विष्ट लगायतले सम्मान गर्नु भएको थियो ।